नयाँ सरकार गठनमा हलो अड्केको सांसदहरूको प्रतिक्रिया «
नयाँ सरकार गठनमा हलो अड्केको सांसदहरूको प्रतिक्रिया
sf7df8f}F, #) r}t . k|ltlglw;efsf] ;f]daf/ a;]sf] a}7s .
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय गर्न नसक्दा नयाँ सरकार गठनमा हलो अड्केको बताए ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपश्चात सञ्चारकर्मीहरू माझ प्रतिक्रिया दिदैँ सांसद थापाले जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय गर्न नसक्दा नयाँ सरकार गठनको बाटो नखुलेको बताए । जसपाको अनिर्णयका कारण सरकार गठनको हलो अड्किनाले वर्तमान व्यवस्था र संसदमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताए । जसपाले ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने कि विकल्प खोज्ने स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘जसपाले धेरै घुमाउरो कुरा गर्नुहुँदैन । तपाईंहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्नुछ, सरकार बनाउनुछ, गर्नुस् । जानुस् । निर्णय गर्नुस् । तपाईहरूलाई विकल्प खोज्नुछ, आउनुस् । तपाईंहरूलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने छ भने राख्नुस् न त हिम्मत गर्नुस् । त्यसैले यो ट्याउँट्याउँ, म्याउँ म्याउँ गरेर धेरै अर्थ छैन ।’
सांसद थापाले जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीको सेवा गरिरहेको टिप्पणी समेत गरे । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारको विकल्प खोज्न पहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बाटो खोल्नुपर्ने बताए । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने अथवा समर्थन फिर्ता लिएर बाटो निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सांसद कर्णले आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई जेलभित्रै राखेर झन्डा हल्लाउने काम जसपाले नगर्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हामी बेला आएपछि आफ्नो निर्णय गर्छौ । कसैले जुनबेला भन्नुहुन्छ त्यहीबेला निर्णय गर्ने त हुँदैन नी । पहिले त बाटो खोल्नुप¥यो नि त । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुप¥यो । या समर्थन फिर्ता लिनुप¥यो । कसैले केही नगर्ने खाली हामीले निर्णय गर्ने ? हाम्रो निर्णय मात्रै खोजिराख्ने ? काम गरेर देखाओस् अनि हामी कसैको साथ दिन्छौँ ।’
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले वितरण गरेको विभूषणमा नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नसमेटिएको सम्बन्धमा संसदमा विरोध भएको र त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । जुन सरकारले, जुन प्रधानमन्त्रीले त्यो नक्सा पारित गराउनको लागि यत्रो ठुलो चुनौतीको विचमा सिंगो देशलाई सर्वसम्मत् गराएको छ । त्यो सरकार यस्ता कुराहरूप्रति गम्भिर छ । त्यसैले सदनमा जे उठेको छ, त्यसप्रति सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
उपनेता नेम्वाङले वर्तमान सरकारको विकल्पमा विपक्षी दलहरूले गरेको छलफल र भेटघाटहरूलाई स्वभाविक भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो । मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको भन्दै उनले जटिलताबाट देशलाई निष्कर्षमा पु¥याउन आफूहरू छलफलमा रहेको पनि बताए ।
सरकारको दौडबाट पछि हट्यो कांग्रेस
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बहुमत नपुग्ने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस
बहुमत पुर्याउन सकिएन : माओवादी
नेकपा माओवादी केन्द्रले जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूहका कारण बहुमतको सरकार
ओली–नेपाल वार्ता सकारात्मक
नेकपा एमालेले पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । अध्यक्ष एवम्
नेपाललगायत ४ नेतामाथि गरेको कारबाही फिर्ता
नेकपा एमाले स्थायी समितिले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत ४ नेतामाथि गरेको कारबाही फिर्ता गरेको छ
कर्णालीमा मन्त्रीपरिषद् हेरफेर
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीपरिषद्मा हेरफेर गरेका छन् ।मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रका तीन
सत्ता साझेदारीबारे जसपा छलफलमा
जनता समाजवादी पार्टीले वैकल्पिक सरकार गठनमा सहमति जुटाउन आज शिर्ष नेताबीच छलफल गरेको छ ।ललितपुरको